GLIBC uye EGLIBC kana sei (zvakaipa) kubatana pamwe zvinokanganisa Mahara Software | Linux Vakapindwa muropa
Zvakaitika Zvakanaka, dambudziko rinoita sehunyanzvi rinoshanduka kuita dambudziko rehunhu. Debian inoshandura imwe system raibhurari yeimwe, asi haisi shanduko diki, vanozviitira dambudziko rehunhu, ivo vanonzwisisa chaizvo kuti sei. ¿Taura zvakaipa zveMahara Software? Izvi ndizvo zvatichaona zvinotevera.
C mutauro wepurogiramu zvikasadaro zvakakosha kwazvo uye mudzi kune vamwe, maraibhurari ndiwo maseti emafaira akarongedzwa kutsigira mamwe mapurogiramu. Nouwandu hwedzidziso mbiri idzi isu tatonzwisisa izvo zvinoreva raibhurari yeC uye isu tinogona kuenderera.
GNU / Linux pane Debian uye mamwe akawanda ma distros anoshandisa kusvika parizvino GLIBC, icho chisiri chinhu chinopfuura chimwe chimwe chikamu cheiyo GNU inoshanda sisitimu.
Kuseri kwekodhi yakawanda uye nezvakanyanya, kune vanhu uye mukati mevanhu, kana kuti zviri mumisoro yavo, pane manzwiro, ehe, akanaka uye akaipa.
Ndichitsvaga zvinhu zvekutsanangura idzi nhau ndakagumira muDigg uko kwekutanga kutaura kwakataura chaizvo chinhu chimwe chete chandaifunga pandakaona nhau asi muChirungu:
Mumwe munhu anogona kutsanangura nezve izvi kwandiri ndapota? Muchina wangu unoshandisa Debian uye ini ndinoda ino inoshanda sisitimu, zvisinei ini handisi imwe mhando yeiyo huru Linux geek saka ini handinzwisise kuti nhau dzinondibata sei
Panzvimbo pekutsanangura zvakaitika, zvirinani kuti ndishandure mhinduro yawakagamuchira (mushanduro yemahara yangu):
Glibc raibhurari yakakosha mukushanda kweLinux. Anenge mapurogiramu ese anoishandisa nekuti inoita zvinhu zvakapusa sekugovera ndangariro, kuenzanisa zvinyorwa, kupurinda iyo skrini nezvimwe zvakadaro. Mumwe wevanonyanya kukosha vanhu mukuvandudzwa kwe glibc ndiye Ulrich drepper, uyo akaenderera mberi zvakanyanya muhunyanzvi, anorema iye ave nevamwe vanhu uye anowanzo ramba shanduko kunyangwe ivo vane njere kune vazhinji.
Vamwe vakaguta nezvinhu zvaasina kuita uye nekutaura kwake, saka ivo vakatora kopi ye glibc kuti vaite chero shanduko dzavaida kwazviri. Iyo tariro ndeyekuti iyi vhezheni ichagadzirisa kakawanda, igadzikane, ive nezvakawanda maficha, uye ive iri nani purojekiti yakazara. Kana izvi zvikaitika, Debian uye pamwe ese ma distros anobva mairi seUbuntu kana Mepis anozobatsirwa zvakanyanya.
Chinhu chakafanana chakaitika neGCC (egcs) uye XFree86 (X.org) uye nguva mbiri idzi dzaireva chimwe chinhu chinobatsira kwazvo.
Tsananguro yacho ndeyechokwadi, kubva kumusoro kusvika pasi, kunze kwekuratidzira kwekuzviisa pasi kwemugadziri (izvo zvinondiyeuchidza nezve mutiny muMenéame kubva pamazuva mashoma apfuura) sezvo isu tisingazive anovandudza zvakanyanya uye isu hatigone kuita kukosha kukosha pane kwake basa kure zvakadaro.
Asi tinoona dos nyaya nhatu dzinonakidza kwazvo dzakasununguka kwazvo Software asi dzichirova kwazvo nezve kusimudzira kwechirongwa:
1- Mushambadzi mukuru anogona kuvapa ivo guru uye ita zvaunoda, kupedzisa kusvotesa avo vanobatsira kugadzira kunyorera kana mune ino raibhurari. Hukama hwehukama idambudziko rakaomarara pakati pevagadziri uye huripo hurukuro kuvandudza.
2- Kuti kana iwe usingade mashandiro anoita yemahara software yekuvandudza timu inoshanda, unogona kutanga kugadzirisa nyaya nemaoko ako pachako uye kwete mumacombos, asi uchichengeta yako wega kopi. Chakavanzika: "Kana iwe usingazvifarire, enda«… Asi kugadzira yako pachako kunyorera.
3- Kuti kupatsanurwa kwerudzi urwu inogona kuita vashandisi zvakanaka, kunyanya kana iro rekutanga basa rekuvandudza rakashata kana riri kupfuura nenguva yakaipa. Tinogona kuidana makwikwi kana kuvandudzwa, iwe uchapindura kwatiri.
Chii chakaitika pakupedzisira?
Kubudirira kwe «kusarura vakomana»Zvinozivikanwa se EGLIBCIzvo zvakapedzisira zvave zvechokwadi, zvakakwana kuti Debian arege iyo yekutanga vhezheni mune inotevera vhezheni, huya, iyo GNU, Stallman's.
Ichi zvakare chiratidzo chitsva (chakatarisa pasi pemvura) chakanangana neFSF naStallman, zvishoma nezvishoma Debian anosiya zvimwe zvinhu zveGNU, chiito chechokwadi chekusununguka kana iwe uchifunga nezvazvo kubva mukukonana pamusoro pemablobs.
Kunge rudo, zvinoita sekunge mahara software inokunda matambudziko ese.
Ndakamirira makomenti ako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » GLIBC uye EGLIBC kana sei (zvakaipa) kubatana pamwe zvinokanganisa Mahara Software
Izvo zvine musoro kuti izvi zviitike. Ziva kuti haina kushata munzira ipi neipi. Iwe haufarire mashandiro anoita chimwe chinhu uye mushe, unoedza kuchichinja. Ichokwadi kuti zvinokatyamadza kana vari mapoka eboka revanhu vanodhonzera kudivi rimwe chete. Asi munzira iyo rusununguko haina kushata zvachose. Kutenda kune izvozvo kune akawanda akasiyana magovanwe, mamiriro edesktop akabuda mune mamwe mapurojekiti. Uye saka kunyangwe ivo vachiita senge vakasiyana. Iri kupa rusununguko rudiki kune avo vanotenda kuti vanogona kuita chimwe chinhu zvirinani. Isu tese hatifunge nenzira imwechete. Uye zvakanaka, ngazvive saizvozvo.
yep, ndicho chinhu chakanaka nezve Mahara Software, chero munhu anogona kugadzira forogo ... kunyangwe hazvo, kuti uzviite unoda kubatana uye kupfuura chero chinhu (ini ndakakanganwa izwi)
Chero zvazvingaitika, chikuru icho, sezvandakambotaura, ndicho chinhu chakanaka nezve software yemahara, zvirokwazvo matekinoroji azvino makopi evamwe, chinhu chakanaka nezve software yemahara ndechekuti kopi yacho mahara, uye chero munhu anogona kugadzira kopi yekopi ... nekudaro zvimwe zvitsva zvinobuda ... zvinonzwika zvichishamisa asi ichokwadi.
izvi zvinondiyeuchidza mariaDB
izvi zviri kuzoshandiswa ne sid, handiti? Ini ndinoshandisa Lenny, ndingaishandisa sei?
Pindura kuna seth
Zvinondiyeuchidza nezvemutsara chaiwo "Kuravira mavara"; Ini ndinofunga ichi chisarudzo chakanaka naDebian, kunyangwe EGLIBC iri diki, hazvireve kuti hazvizove zvakanaka seGLIBC.
Ini ndinobvumirana newe kubva kunobva nezve "gurus" vanogadzira, ini ndichiri kudzidza basa, uye kune vazhinji vasingagamuchire nzira yehurongwa, kana imwe pfungwa yakasiyana neyavo, uye kunyangwe iwe uri muchikwata neavo vanhu uye nekuvapa zano rakanaka, vanoguma voshandisa iyo yavanoda uye kazhinji kazhinji kunyangwe isingashande pane iyo yawakarongera, izvi zvakajairika.
Sezvatotaurwa, ndinofungawo kuti izvi zvinobatsira GNU / Linux zvakanyanya, zvirinani kuve nemapurojekiti mazhinji pane mashoma, handiti?
Ichokwadi kuti pamwe zvirinani kujoina masimba, asi ini ndichiri kufunga kuti muLinux dzakasiyana ndidzo dzatinoda zvakanyanya, semuenzaniso, Mazuva mashoma apfuura ndanga ndichiedza kurodha peji rewebhu rakazara, kuwana mimwe mifananidzo, uye ne "wget" ndakazvikanda matambudziko, ndakadhonza zvandanga ndisingade, ndakatsvaga google ndikawana "httrack" ndakaishandisa uye ikashanda zvirinani, dai "wget" yaivapo paizove nezvose. Kunyangwe ini ndichiri kuda "wget" zvimwe: P
Zvinhu zviviri, chimwe, ini ndinotsigira shanduko kuenda eglibc 100%. Kuedza kuunganidza glibc yemaoko ndeyeye akashinga, kune matatu kana mana glibc-gcc maviri maviri anoshanda, uye mutsauko mudiki unokwana kuita kuti zvikone kuve nechinhu chiri kushanda.
Imwe yacho inofanira kunge iri raibhurari panzvimbo pechitoro chemabhuku.
raibhurari = raibhurari, chitoro chemabhuku = chitoro chemabhuku.
Xfce uye LXDE akareruka desktop desktop.
Linux haigone kukura isina proprietary software